Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » हिटरले गर्दा नेपालमा अस्ताए दुई भारतीय सुन्दर परिवार !
(हेटौंडा) — नेपाल घुम्न भारतको केरलाबाट आएको १५ जनाको टोली पोखराबाट हेटौंडा हुँदै रिजर्भ गाडी लिएर सोमबार दामन सिमभन्ज्याङ आइपुगेको थियो । मकवानपुरको थाहा नपा–४ दामनको होटल एभरेस्ट पानोरमामा उनीहरूले १११ देखि ११५ सम्मका चार कोठा बुक गरेका थिए । त्यसै पनि वर्षैभरि चिसो भइरहने दामनको मौसम । सोमबार घाम लागेको थिएन ।
चिसो निकै बढेको थियो । १११ नम्बर कोठामा मंगलबार बिहान ८ बजेसम्म ग्यास हिटर बलिरहेको थियो । कोठाका दुई बेडमा सुतिरहेका आठ जना अ’चे’त पल्टिएका थिए । होटलका कर्मचारीका अनुसार कटेजको कोठाका सबै झ्यालढोका बन्द थिए ।
‘उनीहरू सबै अ’चेत देखेर हामी सबै आत्तियौं । उनीहरूकै साथीहरूले घचघच्याउँदै बोलाए तर कोही बोलेनन्,’ होटल व्यवस्थापक शिव केसीले भने, ‘त्यसपछि हामीले प्रहरीलाई खबर गर्‍यौं ।’ अ’चे’त अवस्थाका चार बालबालिका र दुई जोडीलाई होटलबाट उ प चा रार्थ हेलिकप्टरमा काठमाडौंको ह्याम्स अ स्प ता ल पुर्‍याइयो । तर, कोही पनि बाँ’चे’न’न् । मृ त्यु हुनेमा केरलाको तिरुवनन्तपुरमका ३८ वर्षीय प्रवीणकृष्ण नायर, ३५ वर्षीया शारण्य शशि र उनीहरूका सन्तान ९ वर्षीया श्रीभद्र, ७ वर्षीया आर्चा प्रवीण, ५ वर्षीय अभिनव नायर छन् । त्यसैगरी ३४ वर्षीय रञ्जित कुमार टीबी, ३४ वर्षीया इन्द्र लक्ष्मी र उनीहरूका २ वर्षीय छोरा वैष्णवको मृ त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
राति यस्तो भयो…
भारतीय पाहुनाले सोमबार मध्यरात कोठा चिसो भएको भन्दै ग्यास हिटर कोठामा लगेका थिए । ‘मध्यरातमा रिसेप्सनमा आएर रोक्दारोक्दै पनि हामीलाई हप्काएर ग्यासको हिटर लैजानुभयो,’ व्यवस्थापक केसीले भने, ‘इलेक्ट्रिक बेड भएकाले बेग्लै हिटर आवश्यक थिएन ।’ भारतको केरलाबाट पोखरा हुँदै सोमबार बेलुका साढे ९ बजे १५ जना उक्त होटलमा आइपुगेका थिए । केसीलाई लाग्छ, गर्मी भइरहने स्थानबाट आएका पर्यटक भएकाले उनीहरूलाई दामन निकै चिसो अनुभव भएको थियो । कोठाको झ्यालढोका थुनेर ग्यास हिटर बाल्दा हुने जोखिमबारे सायद जानकारी थिएन ।
इजी ट्रिपमार्फत एक रातलाई बुकिङ गरेर उनीहरूको टोली पानोरामा रिसोर्टमा आइपुगेका थिए । मकवानपुरको सबैभन्दा उचाइ २४ सय ८८ मा रहेको उक्त रिसोर्टमा आइपुग्नेबित्तिकै उनीहरूले निकै चिसो महसुस भएको बताएका थिए ।
बालबालिकासहित १५ जना रहेको टोलीले रिसोर्टका १११, ११२, ११४ र ११५ नम्बरका चारवटा कटेजका कोठा बुकिङ गरेका थिए । एउटा कटेजमा दुईवटा बेड छन् । एउटा बेडमा प्रौढ दुई जना मात्र सु’त्न मिल्छ । घ ट ना भएको १११ नम्बरको कटेजमा ११२ नम्बरका सहित प्रौढ र बालबालिकासहित आठ जना खाँदिएर सुतेका थिए । उनीहरू सबैको मृ त्यु भयो । ११४ र ११५ नम्बर कोठाका पाहुना भने सुरक्षित रहे ।
होटलमा आएपछि उनीहरू कोठामा गएर ‘फ्रेस’ भएपछि करिब १० बजे रेस्टुरेन्टमा आए । आफैंले ल्याएको मा’द’क पदार्थ से’व’न गरे पनि स्न्याक्स भने रेस्टुरेन्टको खाएका थिए । राति साढे १० बजे ११४ र ११५ नम्बर कोठामा बस्नेहरू खाना खाएर सुत्न गए । तर १११ र ११२ नम्बरको कोठामा बस्नेहरू खाना खाएर पनि पुनः मादक पदार्थ सेवन गरेर रेस्टुरेन्टको ग्यास हिटर नजिक बसिरहे ।
उनीहरूले रेस्टुराँका कर्मचारीलाई ‘कोठा चिसो छ, भित्र हिटर चाहिन्छ’ भनेर राखिदिन माग गरे । ‘काम गर्ने भाइले ओछ्यानमा इलेक्ट्रिक तन्ना जडान गरेको छ, तातो छ भनेर विश्वास दिलाउन प्रवीणकृष्ण नायरलाई कोठामा लगेर ओछ्यान छाम्न लगाए । तर उनले चिसो छ भनेर जिद्दी गरे,’ व्यवस्थापक केसीले भने, ‘राति करिब २ बजे जबर्जस्ती गरेर रेस्टुरेन्टमा बलिरहेको ग्यास हिटर बोकेर कोठामा लगे ।’ रेस्टुराँ र कोठा झन्डै अढाई सय मिटर दूरीमा छ । ‘कोठामा ग्यास हिटर बाल्नु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि मानेनन्,’ केसी भन्छन् ।
१११ नम्बरको कोठामा रेस्टुरेन्टको हिटर लगिएपछि ११२ मा बसेका परिवार पनि ताप्न पुगेका थिए । ग्यास हिटरको तातोमा दुई परिवारका आठ जना दुईवटा बेडमा कोचिएर सुते । बाहिर निकै चिसो भएकाले उनीहरूले कोठाको झ्याल–ढोका सबै थुनेका थिए । ‘बिहान ८ बजे चिया लिएर बाहिरबाट बोलाउँदा जवाफ दिएनन्,’ केसीले भने, ‘११४ नम्बरमा बस्ने उनीहरूकै साथीले ढकढक्याउँदा छेस्किन हालेकै रहेनछन् । सजिलैसँग खुल्यो ।’ खुलेपछि भित्र हेर्दा सबै अ चे त थिए । तत्काल प्रहरी टोली पनि आइपुग्यो । कैलाश एयरको हेलिकप्टर बोलाएर सबैलाई काठमाडौं पठाइयो । हेलिकप्टरले पहिले खेपमा पाँच र दोस्रो खेपमा तीन जनालाई अस्पताल लगेको थियो । टोलीका अन्य सात जना पनि काठमाडौं लागे ।
ह्याम्स अस्पतालले मृ त घोषित गरेका सबैको श व पोस्टमार्टमका लागि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ ।
किन एसी नराखेको ?
मंगलबार भएको घटनाको कारक कोठामा एसी नहुनुलाई मनिएको छ । कोठामा एसी नभएकै कारण पाहुनाले ग्यास हिटर लगेका थिए । आवश्यकताअनुसार कोठाहरूमा भेन्टिलेटर पनि नहुनुलाई होटल व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने प्रहरीले पनि जनाएको छ । ‘धेरै–धेरै लागतमा खुलेका होटलले पनि एसी राख्न ध्यान नदिनुको नतिजा यति नराम्रो घटनाका रूपमा आयो,’जसले गर्दा दुई भारतीय सुन्दर परिवारले ज्या न गु मा उ नु दु:खद कुरा हो । थाहा नगरपालिकाका प्रमुख लवशेर विष्टले भने, ‘यो दुःखद घटनाबाट यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले पाठ सिक्नुपर्छ ।’